> Resource > Ladnaansho > Recovery File iWork: Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray iWork Files
Sidee ayaan u soo kaban karto, tirtiray iWork File on Mac?
Ok, Wax dhibaato ah oo ku saabsan codsiga iWork on my Mac. Waxaan tirtiray file iWork ah si qalad ah oo aan anigu waxaan iyada u synced in iCloud weli. Waa khudbad ah in aan u baahanahay in la isticmaalo berri. Sidoo kale aan calaamadeeyay Trash, laakiin ma halkaas ku heli. Waxaan u baahanahay gargaar si ay u soo kabsadaan file iWork tirtiray. Ma leedahay qaar ka mid ah talo wanaagsan?
codsiga iWork waa sida Apple software xafiiska on Mac. Waxaad si fudud u abuuri karaan iyo edit taabanaysa isu-diridda, pages iyo tirooyin leh codsiga iWork aad Mac. Si kastaba ha ahaatee, files iWork weli lagu lumin karaa sababtoo ah OS qalad, tirtirka, musuqmaasuqa ama xataa jeermiska fayraska. Sida caadiga ah waxaad soo kaban karto, files iWork ka iCloud. Haddii iCloud waa ciirsi, uma baahnid in aad si aad u welwelsan aad. Weli waxaa iWork software kabashada file oo kaa caawin kara.
Wondershare Data Recovery for Mac waa barnaamij sida kan kara inuu ka soo kabsado iWork files lumay ay sabab u tahay tirtirka shil ah, formatting ula kac ahayn qoqobkii, iyo xitaa baadi nidaam. Waxaa soo kabanayo dhammaan noocyada file codsiga iWork, oo ay ku jiraan bogagga, taabanaysa isu-diridda iyo lambarada. Plus, codsigan waa xoog badan yahay la socon kara soo kabashada file iWork on dhan kombiyuutarada Mac, oo ay ku jiraan Macbook, iMac, Macbook Air, Macbook Pro, iwm
Download version tijaabo ah Wondershare Data Recovery for Mac ah inuu ka soo kabsado files iWork tirtiray on Mac hadda!
3 Talaabada inuu ka soo kabsado tirtiray iWork Files
Tallaabada 1 Dooro habka soo kabashada ah si ay u bilaabaan soo kabashada file iWork
Kadib markii ay Wondershare Data Recovery for Mac, aad arki doonaa interface ah soo socda. Waxaad ku baran kartaa kasta shuqulladiisa hab kabashada by reading tilmaamaha uu furmo.
Inuu ka soo kabsado tirtiray, formatted, lumay ama kharribeen files iWork, oo aad qaadi karto "lumay Recovery File" mode sida isku day ah oo hore.
Tallaabada 2 xijaab Scan / mugga meesha files iWork aad ayaa laga badiyay ka
Markaas barnaamijka lagu ogaan doonaa oo tusi doono oo dhan muda / qoruhu aad Mac. Oo waxaad u baahan tahay oo kaliya in ay doortaan mid ka mid ah in aad doonaysid in aad ka soo kabsado files iWork tirtiray ka oo guji "Scan" ay soo baadhaan.
Fiiro gaar ah: Waxaad "Enable Deep Scan" karaa inuu ka soo kabsado files iWork ka disk ah formatted.
Tallaabada 3 kabsado tirtiray files iWork on Mac
Marka iskaanka ka baxayo, waxaad ku eegaan karo files iWork helay si uu u hubiyo in files iWork badiyay la kama uusan soo kabsan karaan ama.
Markaas waxaad karo files iWork aad ku socoto si loo soo celiyo oo guji "Ladnaansho" badhanka si ay u soo celin aad Mac badbaadiyo.
Fiiro gaar ah: Si looga fogaado xogta overwritten, fadlan ha ka badbaadiyo files iWork soo kabsaday in ay xijaab asalka ah.